Izindaba ezimnandi: imijovo yokugoma kungenzeka ingavikeli igciwane kuphela, kodwa izovikela nokushona | Scrolla Izindaba
Izindaba ezimnandi: imijovo yokugoma kungenzeka ingavikeli igciwane kuphela, kodwa izovikela nokushona
Injongo yemijovo yokugomela i-Covid-19 ibaluleke kakhulu kunokuvikela igciwane. Ivikela ukushona nokulaliswa esibhedlela.
Njengoba ukukhathazeka kukhuphuka ukuthi imijovo yokugoma i-Covid-19 ayisebenzi kangako uma kuqhathaniswa nokuhlukahluka okusha kwegciwane, ikakhulukazi okwehlukile kwaseNingizimu Afrika, imininingwane ethembisayo ikhombisa ukuthi isasebenza ekuvikeleni ukugula okukhona.
Inkampani eyakha izidakamizwa yaseBrithani i-Astrazeneca imemezele ngoMgqibelo ukuthi imijovo yayo yokugoma ibonakala izosebenza ngamaphesenti amancane ekulweni negciwane le-Covid-19 eNingizimu Afrika.
Kodwa-ke, kulabo abangaphezu kwezi-2000 akekho ngisho noyedwa okuhlolwe kubo imijovo yokugoma olaliswe esibhedlela noma osashonile.
Lokhu kusho ukuthi umjovo wokugoma kungenzeka ungavimbeli abantu ekutholeni leli gciwane nasekuthuthukiseni izimpawu ezincane ezifana nomphimbo obuhlungu noma ukukhwehlela.
Kodwa-ke, kusenokwenzeka ukuthi uvikile abagulayo ukuthi bangadingi ukwelashwa esibhedlela.
Lezi zindaba ziza ngemuva kokuthi abakhiqizi be-Moderna, i-Johnson & Johnson (J&J) ne-Novavax bonke bebike ukuthi amazinga okusebenza komjovo wokugoma eNingizimu Afrika uzosebenza ngamaphesenti amancane kodwa kungenzeka wehlise ukugula okunzima okubangelwa yigciwane kumuntu.
NgoMasingana i-J&J imemezele ukuthi ukusebenza komjovo wayo kufinyelele kumaphesenti angama-72 eMelika, Uma kuqhathaniswa namaphesenti angama-57 kuphela eNingizimu Afrika.
Kodwa-ke, le miphumela ikhombisa nokuthi umthamo owodwa womjovo wokugoma i-J&J uphumelele ngamaphesenti angama-85 ekuvikeleni kwizifo ezinzima.
Ngokukhulu ukucophelela, akekho ngisho noyedwa umuntu osathola umjovo wokugoma osalaliswa esibhedlela noma osashonile.
Ngaphezu kwalokho, i-Washington Post ibika ukuthi ezifundweni ezimbili ezihlukene, “kubantu abangaphezu kwezi-30 000 abathola umjovo wokugoma i-Pfizer noma i-Moderna, umuntu oyedwa kuphela owagula ngokwanele ukuba alaliswe esibhedlela.”
Le datha ikhombisa ukuthi yize imijovo yokugoma kungenzeka ingakwazi ukulisusa ngokuphelele igciwane ebusweni bomhlaba, izokwehlisa kakhulu inani labantu elibabulalayo.
Kulokhu, izibhedlela zizoyeka ukugcwala, ogogo nomkhulu bazobona abazukulu babo futhi izikole sezingavulwa futhi, konke lokhu kungenzeka ngaphandle kwengozi enkulu yokushona ngenxa ye-Covid-19.